M.S.T Institute: CIMP Program
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးသော IIB- Internet Marketing ဘာသာရပ်ပို့ချမည်။
၂၁ရာစု၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပုံစံသစ်ဖြစ်သော Digital/ Internet Marketing အသုံးချဘာသာရပ်အား Institute of Business- EC Council USA မှ တကမ္ဘာလုံးသို့ပို့ချခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အသိအမှတ်ပြုသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင် လက်မှတ် (CIMP- Certified Internet Marketing Practitioner) ဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်စေရန်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ အကျိုးအမြတ်များစေရန်၊ ထိရောက်၍ စနစ်ကျသော Internet Marketing စနစ်များကို ယနေ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း လုပ်ငန်းကြီးများနှင့် လုပ်ငန်းငယ်များတွင်ပါ အထူးဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း နိုင်ငံတကာ ရင်ဘောင်တန်း၍ Internet Marketing စနစ်တကျ ပြုလုပ်နိုင်ရန်လိုအပ်လာပါသည်။ Internet Marketing အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ လစာများ သည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အလုပ်ခွင်အသီးသီးတို့တွင် အလွန်ရေပန်းစားလျက်ရှိပါသည်။
အချိန်တိုအတွင်း သင့်စီးပွားရေး၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို များစွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည့် Internet Marketing ဘာသာရပ်ကို တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းပြိုင်ဖက်များအပေါ်သာလွန်စေပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်နိုင်စေပါမည်။ နိုင်ငံတကာရှိ IIB centre များတွင် သင်တန်းကြေး USD1800 ပေးတက်ရသော ဘာသာရပ်အား မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်သာဆုံး အခွင့်အလမ်းများဖြင့်တက်ရောက်ရယူလိုက်ပါ။
၂) Developer များ
၃) Web Designer များ
၄) Marketing ဆောင်ရွက်နေသူများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ
၅) Digital/ Internet Marketing ကို စိတ်ဝင်စားသူများ-
သင်တန်းကာလ- ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့အထိ
သင်တန်း အချိန်- ညနေ (၃) နာရီမှ (၅) နာရီအထိ
သင်တန်းကြေး- Digital Courseware+Int’l Exam = (၂၅ဝဝဝဝကျပ်၊ သင်တန်းကြေး ၁၅ဝဝဝဝကျပ်)
(ကုန်ကျစရိတ်) စုစုပေါင်း (၄ဝဝဝဝဝ)ကျပ်
ဒီဇင်ဘာလ (၅) အမှီ သင်တန်းအပ်သူတိုင်းအတွက် 30% Discount ခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။ စုစုပေါင်း (၂၈၀၀၀၀ကျပ်သာ)
သင်တန်း အပ်ခြင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက--Partner of IIB (Institute of Business) and EC Council :
M.S.T ICT Institute: အမှတ် (၁၈၄) အခန်း(၅) ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၁ ၃၉၂၁၆၅၊ ၀၁ ၃၉၂၉၈၃၊ ၀၉၅၁၂၆၁၀၈။
စာတွေ့/လက်တွေ့ လေ့လာသင်ကြားရမည့် ဘာသာရပ်များမှာ-
(GET THE GREAT CHANCE NOW!!!) REGISTER CIMP CLASS TODAY!!!